လူပျိုများအတွက် ပလူးပလဲ ပိုးပန်းပုံအကြောင်း ၉ ချက် – Gentleman Magazine
လူပျိုများအတွက် ပလူးပလဲ ပိုးပန်းပုံအကြောင်း ၉ ချက်
သင် ကြိုက်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို စကားပြောရတာထက် ကြောက်ဖို့ကောင်းတာ ဘာများရှိမလဲ။ သင်ကံကောင်းတာက လူမှုရေးပညာရှင်တွေက ပိုးပန်းမှု အောင်မြင် မအောင်မြင် ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ အချက် ၉ ချက်ကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
၁. စုံတွဲတွေလဲ ပလူးပလဲ ပိုးပန်းဖို့ လိုပါတယ်
ပိုးပန်းတယ်ဆိုတာ လူပျိုကိစ္စပါ။ ဒါပေမယ့် စုံတွဲတွေလဲ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပိုးပန်းနေဖို့ လိုပါသေးတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပလူးပလဲ နေချင်လို့ ပိုးပန်းကြတာပါ။ သူတို့ ပါတနာနဲ့ နှစ်ယောက်ထဲကမ္ဘာလေး ဖန်တီးဖို့လဲ ပိုးပန်းကြပါတယ်။
၂. လူတွေ ပိုးပန်းရတဲ့ အကြောင်း ခြောက်မျိုးရှိပါတယ်
– ကိုယ့်ဘာသာ တန်ဖိုးထားမှု မြင့်မားစေရန်
– တစ်ခုခု ရလိုမှု
ဒီအကြောင်းတွေထဲမှာ ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမ ကွဲပြားပါသေးတယ်။ ယောက်ျားတွေက လိင်ကိစ္စအတွက် ပိုးပန်းတာများပြီး မိန်းမတွေက ပလူးပလဲ နေချင်တာ များပါတယ်။
၃. တချို့ စကားစတွေက ပိုးပန်းလို့ ပိုကောင်းစေပါတယ်
ယောက်ျားတွေက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တဲ့တိုးပြောတာ နှစ်သက်ပြီး မိန်းမတွေကတော့ သွယ်ဝိုက်ပြီးပြောတာ ပိုကြိုက်ပါတယ်။ မိမိပိုးပန်းမည့်သူအပေါ် မူတည်ပြီး စကားစရှာပါ။
၄. ယောက်ျားတွေဟာ မိန်းမတွေကို သူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့အလွယ်တကူ ထင်တတ်ကြပါတယ်
လေ့လာမှုတွေမှာ ယောက်ျားဟာ မိန်းကလေးတွေ သူတို့ကို စိတ်မဝင်စားပဲ စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ မှားယွင်းထင်မြင်တတ်ကြပြီး မိန်းမတွေကတော့ ယောက်ျားတစ်ယောက်က သူတို့ကို စိတ်ဝင်စားနေတာတောင် စိတ်ဝင်စားနေမှန်း မသိကြပါဘူး။ ယောက်ျားတွေဟာ ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ လိင်ကိစ္စကို ပိုမြင်တတ်ကြပြီး မိန်းမတွေက လျော့မြင်တတ်ကြလို့ပါ။
၅. ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး အကျင့်ဟာ ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမ ကွာခြားပါတယ်
– ပျော်ရွှင်မှုဟာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဆွဲဆောင်မှူအရှိဆုံး သဘာဝပါ။ ယောက်ျားတွေအတွက်ကတော့ ဆွဲဆောင်မှု မရှိဆုံးပါ။
– ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားမှုက ယောက်ျားတွေရဲ့ ဆွဲဆောင်မှု အရှိဆုံး သဘာဝပါ။ မိန်းမတွေအတွက်တော့ ဆွဲဆောင်မှု မရှိဆုံးပါ။
၆. ဖြည်းဖြည်းချင်းစီ ပိုးပန်းပါ
ပိုးပန်းတယ်ဆိုတာ ဆွဲဆောင်မှုကို ခံစားရပြီး ပထမဆုံး ညှိနှိုင်းတဲ့ အလုပ်ပါ။ ငါ နင့်ကို ကြိုက်တယ်၊ နင် ငါ့ကို ကြိုက်သလားလို့ ပြောတာနဲ့ တူတူပါပဲ။ အဲဒါဟာ တကယ် ချစ်စကားမပြောခင် စမ်းသပ်တာပါ။ သင့်ရဲ့ ဆွဲဆောင်ခံရမှုကို အများကြီးမပြပဲ ဖြည်းဖြည်းခြင်း သူမသိအောင် ပြရပါမယ်။
၇. ပိုးပန်းခံရခြင်းဟာ အားလုံးထဲမှာ ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးမို့ မဟုတ်ပါဘူး
သင်က လူလွတ်ပါလို့ အချက်ပေးနိုင်လို့ပါ။ ပြုံးတတ်ပြီး မျက်လုံးချင်းဆုံတတ်သူတွေဟာ ရုပ်ရည် ချောမောလှပသူတွေထက် ပိုးပန်းခံရနှုန်း ပိုများပါတယ်။
၈. မျက်လုံးချင်းဆုံတာ တကယ်အထောက်အကူပြုပါတယ်
ခေါ်တောကြည့် ကြည့်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ မျက်လုံးချင်း ဆုံကြည့်နေတာမျိုးဟာ တကယ်အကျိုးရှိပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်နှစ်ခု မျက်လုံးချင်းဆုံမိခြင်းဟာ တခြားအလုပ်တွေအားလုံးထက် ပိုမို ဆွဲဆောင်မိစေပါတယ်။
၉. နည်းနည်းလေး စိတ်ပါလက်ပါ စကားပြောပြီးရင် သံယောဇဉ်ဖြစ်စေပါတယ်
သင်ကြိုက်တဲ့သူကို စကားပြောရင်း မေးခွန်းတွေ မေးတာဟာ ကောင်းတဲ့ အိုင်ဒီယာပါ။ သင်ဘာတွေမေးလဲဆိုတာပဲ ဂရုစိုက်ရမှာပါ။ နက်နက်နဲနဲတွေ မမေးပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဝါသနာလေးတွေ မေးပါ။ မှတ်ထားပါ။ မိန်းမတွေဟာ သူတို့ ပျော်တဲ့ အရာတွေအကြောင်း အရမ်းပြောချင်ပါတယ်။
လူပြိုမြားအတှကျ ပလူးပလဲ ပိုးပနျးပုံအကွောငျး ၉ ခကျြ
သငျ ကွိုကျတဲ့ ကောငျမလေးတဈယောကျကို စကားပွောရတာထကျ ကွောကျဖို့ကောငျးတာ ဘာမြားရှိမလဲ။ သငျကံကောငျးတာက လူမှုရေးပညာရှငျတှကေ ပိုးပနျးမှု အောငျမွငျ မအောငျမွငျ ဆုံးဖွတျပေးနိုငျတဲ့ အခကျြ ၉ ခကျြကို ဖျောပွပေးထားပါတယျ။
၁. စုံတှဲတှလေဲ ပလူးပလဲ ပိုးပနျးဖို့ လိုပါတယျ
ပိုးပနျးတယျဆိုတာ လူပြိုကိစ်စပါ။ ဒါပမေယျ့ စုံတှဲတှလေဲ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ပိုးပနျးနဖေို့ လိုပါသေးတယျ။ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ပလူးပလဲ နခေငျြလို့ ပိုးပနျးကွတာပါ။ သူတို့ ပါတနာနဲ့ နှဈယောကျထဲကမ်ဘာလေး ဖနျတီးဖို့လဲ ပိုးပနျးကွပါတယျ။
၂. လူတှေ ပိုးပနျးရတဲ့ အကွောငျး ခွောကျမြိုးရှိပါတယျ
– ကိုယျ့ဘာသာ တနျဖိုးထားမှု မွငျ့မားစရေနျ
– တဈခုခု ရလိုမှု
ဒီအကွောငျးတှထေဲမှာ ယောကျြားနဲ့ မိနျးမ ကှဲပွားပါသေးတယျ။ ယောကျြားတှကေ လိငျကိစ်စအတှကျ ပိုးပနျးတာမြားပွီး မိနျးမတှကေ ပလူးပလဲ နခေငျြတာ မြားပါတယျ။
၃. တခြို့ စကားစတှကေ ပိုးပနျးလို့ ပိုကောငျးစပေါတယျ
ယောကျြားတှကေ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး တဲ့တိုးပွောတာ နှဈသကျပွီး မိနျးမတှကေတော့ သှယျဝိုကျပွီးပွောတာ ပိုကွိုကျပါတယျ။ မိမိပိုးပနျးမညျ့သူအပျေါ မူတညျပွီး စကားစရှာပါ။
၄. ယောကျြားတှဟော မိနျးမတှကေို သူတို့ကိုစိတျဝငျစားတယျလို့ အလှယျတကူ ထငျတတျကွပါတယျ
လလေ့ာမှုတှမှော ယောကျြားဟာ မိနျးကလေးတှေ သူတို့ကို စိတျမဝငျစားပဲ စိတျဝငျစားတယျလို့ မှားယှငျးထငျမွငျတတျကွပွီး မိနျးမတှကေတော့ ယောကျြားတဈယောကျက သူတို့ကို စိတျဝငျစားနတောတောငျ စိတျဝငျစားနမှေနျး မသိကွပါဘူး။ ယောကျြားတှဟော ပါတျဝနျးကငျြမှာ လိငျကိစ်စကို ပိုမွငျတတျကွပွီး မိနျးမတှကေ လြော့မွငျတတျကွလို့ပါ။
၅. ဆှဲဆောငျမှုအရှိဆုံး အကငျြ့ဟာ ယောကျြားနဲ့ မိနျးမ ကှာခွားပါတယျ
– ပြျောရှငျမှုဟာ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ ဆှဲဆောငျမှူအရှိဆုံး သဘာဝပါ။ ယောကျြားတှအေတှကျကတော့ ဆှဲဆောငျမှု မရှိဆုံးပါ။
– ဂုဏျယူဝငျ့ကွှားမှုက ယောကျြားတှရေဲ့ ဆှဲဆောငျမှု အရှိဆုံး သဘာဝပါ။ မိနျးမတှအေတှကျတော့ ဆှဲဆောငျမှု မရှိဆုံးပါ။
၆. ဖွညျးဖွညျးခငျြးစီ ပိုးပနျးပါ
ပိုးပနျးတယျဆိုတာ ဆှဲဆောငျမှုကို ခံစားရပွီး ပထမဆုံး ညှိနှိုငျးတဲ့ အလုပျပါ။ ငါ နငျ့ကို ကွိုကျတယျ၊ နငျ ငါ့ကို ကွိုကျသလားလို့ ပွောတာနဲ့ တူတူပါပဲ။ အဲဒါဟာ တကယျ ခဈြစကားမပွောခငျ စမျးသပျတာပါ။ သငျ့ရဲ့ ဆှဲဆောငျခံရမှုကို အမြားကွီးမပွပဲ ဖွညျးဖွညျးခွငျး သူမသိအောငျ ပွရပါမယျ။
၇. ပိုးပနျးခံရခွငျးဟာ အားလုံးထဲမှာ ဆှဲဆောငျမှုအရှိဆုံးမို့ မဟုတျပါဘူး
သငျက လူလှတျပါလို့ အခကျြပေးနိုငျလို့ပါ။ ပွုံးတတျပွီး မကျြလုံးခငျြးဆုံတတျသူတှဟော ရုပျရညျ ခြောမောလှပသူတှထေကျ ပိုးပနျးခံရနှုနျး ပိုမြားပါတယျ။
၈. မကျြလုံးခငျြးဆုံတာ တကယျအထောကျအကူပွုပါတယျ
ချေါတောကွညျ့ ကွညျ့နတောမြိုးမဟုတျပဲ မကျြလုံးခငျြး ဆုံကွညျ့နတောမြိုးဟာ တကယျအကြိုးရှိပါတယျ။ ဆနျ့ကငျြဖကျလိငျနှဈခု မကျြလုံးခငျြးဆုံမိခွငျးဟာ တခွားအလုပျတှအေားလုံးထကျ ပိုမို ဆှဲဆောငျမိစပေါတယျ။
၉. နညျးနညျးလေး စိတျပါလကျပါ စကားပွောပွီးရငျ သံယောဇဉျဖွဈစပေါတယျ
သငျကွိုကျတဲ့သူကို စကားပွောရငျး မေးခှနျးတှေ မေးတာဟာ ကောငျးတဲ့ အိုငျဒီယာပါ။ သငျဘာတှမေေးလဲဆိုတာပဲ ဂရုစိုကျရမှာပါ။ နကျနကျနဲနဲတှေ မမေးပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဝါသနာလေးတှေ မေးပါ။ မှတျထားပါ။ မိနျးမတှဟော သူတို့ ပြျောတဲ့ အရာတှအေကွောငျး အရမျးပွောခငျြပါတယျ။
Health Love Others
ခဈြသူနှဈဦး လကျမထပျခငျ ဒါတှေ အရငျဆှေးနှေးတိုငျပငျပါ
22/09/2021 15/09/2021 Thorn Htet
Previous: သင့် အင်္ဂါ ကောက်နေပါသလား
Next: အမျိုးသားတို့ကို ညှို့ငင်နိုင်သည့် အမျိုးသမီးတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း(၅)ခု
သင့် အင်္ဂါ ကောက်နေပါသလား